China Palmitoyl Tetrapeptide-7 fekitari uye vagadziri | JYMed
Product zita: Palmitoyl tetrapeptide-7
Molecular Weight: 694,919 g / mol
Mafomu: Relief zvinogona kuzvimba ganda, chengeta ganda utano
Palmitoyl tetrapeptide-7 mufananidzo chakaita zvokugadzirwa peptide remubatanidzwa iro rinobatanidza nengetani wandei amino acids kuderedza ganda kuzvimba uye muchipo kukuvara ganda. Izvi peptide remubatanidzwa Zvinodavirwawo kuti kukurudzira pakuberekwa kutsva kwakaita collagen fibers vari dermis kubudikidza sevapristi remutumwa cellular ndokumwewo. Palmitoyl tetrapeptide-7 chiri akafunga kuwedzera huwandu hyaluronic asidhi paganda, izvo zvinogona kubatsira sungisa ganda kuburikidza kukwezva mwando kuti Epiderme e. Kunyange zvazvo mushonga anoonekwa ngozi kushandiswa muna ganda kutarisira chirungiso kukwanisa nokuputsa ganda ruvara kungaita kuti ganda atindivare nyaya. Kana uri kuronga kuwedzera zvinhu pamwe palmitoyl tetrapeptide-7 yako ganda kuchengetwa zvigadzirwa, kuita zvishoma nezvishoma kudaro, uye kudiwa kutarisirwa dermatologist yenyu.
Palmitoyl tetrapeptide-7 aionekwa kuti dika fuma dzokushandisa zvizorwa zvigadzirwa nokuda kukwanisa rayo dawo ganda uye kurwira mamwe Anti kukwegura zvinhu zvakadzika ganda munyama. Kunaka solubility mumafuta anoita yakanaka kusarudza kwetunhu zvinozivikanwa yeimwe inoshandiswa dermatological zvigadzirwa kunyanya zvevanopesana kukwegura zvigadzirwa, sezvo wemisanganiswa vangangowedzera kugara homogenous. Kuti vawane zvizere mushumo dzakapoteredza toxicological nyaya, zvingakonzerwa nemishonga nokuda kushandiswa kwenguva refu uye nezvimwewo, ichi palmitoyl tetrapeptide-7 akanga vakabvuma pasi Kwokuzvidira zvizorwa Registration Program muna 2012 kuti FDA kufarirwa.
Mumakore mashoma apfuura, sangano redu zvakawanda uye ozeyewa ehurumende-of-nounyanzvi michina zvakafanana kumba uye kunze. Zvichakadai, redu zvebhizimisi nemidonzvo chikwata nyanzvi wakayeriswa kurutivi kukura Kwakakura Selection nokuda zvizorwa Peptide/ Beauty Peptide Palmitoyl Tetrapeptide-7 / palmitoyl Tetrapeptide CAS 221227-05-0, Tine zvino vana kutungamirira mhinduro. Zvigadzirwa vedu zvikuru kutengeswa kwete chete panguva Chinese kumusika, asiwo akagamuchira panguva dzakawanda indasitiri.
Mumakore mashoma apfuura, sangano redu zvakawanda uye ozeyewa ehurumende-of-nounyanzvi michina zvakafanana kumba uye kunze. Zvichakadai, redu zvebhizimisi nemidonzvo chikwata nyanzvi wakayeriswa kurutivi kukura Palmitoyl Tetrapeptide-7, CAS 221227-05-0, Palmitoyl Tetrapeptide-3, Somunhu ane ruzivo mugadziri nesuvo kugamuchira customized kuitira uye taigona kuita zvakafanana mufananidzo wako kana mharidzo Specification. The chinangwa chikuru vekwedu ndiko kurarama inogutsa ndangariro dzose vatengi, uye simbisai refu refu bhizimisi ukama vatengi uye vanoshandisa rose.